SARCOIDOSIS လေ့လာပြီးသုတေသနပြုလုပ်ငန်းတွေမှာပါဝင် GET
The UK Clinical Trials Gateway (UKCTG) website displays information about clinical trials and other types of research from several different UK registers. Find information about UK မှာလက်ရှိ sarcoidosis-related လက်တွေ့စမ်းသပ်မှုတွေ.
Considering taking part inaclinical trial? Read NHS သတင်းအချက်အလက်နှင့်လမ်းညွှန်မှု တစ်ဦးလက်တွေ့လမ်းကြောင်းအတွက်တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းယူပြီးအကြောင်းကို။
အဆုတ် Sarcoidosis ၏လက္ခဏာပေါ်အစားအသောက်နှင့်ကိုယ်လက်လှုပ်ရှားမှု၏သက်ရောက်မှု။ အယ်လ် Morton-Holtham (Kingston University က) ။
အဆုတ် Sarcoidosis အတွင်း Non-pharmacological multifactorial ပုံစံများ၏တည်ရှိမှုကိုတည်ထောင်။ အယ်လ် Morton-Holtham (Kingston University က) ။
ပညာရှိ (Worldwide မှ Sarcoidosis သုတေသနလေ့လာမှု) ဆေးသမားနှင့်သုတေသီများပိုကောင်းရောဂါနားလည်ပြီးဆက်ဆံပါကကူညီနိုင်ရန်အတွက် sarcoidosis ၏ဝိသေသလက္ခဏာများနှင့်လက်တွေ့သင်တန်းနှင့် ပတ်သက်. ပိုမိုသိရှိလိုပါကရဖို့ရန်ဒီဇိုင်းရေးဆွဲတစ်ဦးကသုတေသနပြုလေ့လာမှု။ A. အ Gerke (အိုင်အိုဝါတက္ကသိုလ်) ။
အဆိုပါ SarcoidosisUK လူနာကောင်စီ join
အဆိုပါ SarcoidosisUK လူနာကောင်စီယုံကြည်စိတ်ချ sarcoidosis လူနာများနှင့် sarcoidosis သုတေသနတစ်ခုကျယ်ပြန့်, အကြောင်းကြားဖွံ့ဖြိုးခြင်းနှင့်ရှေ့ဆက်ဖို့ကူညီတဲ့သူကသူတို့စောင့်ရှောက်သူများ၏အုပ်စုတစုဖြစ်ပါတယ်။ ရန်ဒီနေရာကိုနှိပ်ပါ အဆိုပါလူနာကောင်စီအကြောင်းပိုမိုထွက်ရှာတွေ့ခြင်းနှင့်လျှောက်ထား.
အဆုတ်ကျန်းမာရေးများအတွက်ပဋိညာဉ်စာတမ်းဝင်ရောက်ပါ။ ဤအနေဖြင့်အရေးယူမှအရေးပေါ်ဖုန်းခေါ်ဆိုမှုဖြစ်ပါသည် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာအသက်ရှုလမ်းကြောင်း Societies ၏ဖိုရမ် (firs) for better lung health around the world. The petition will be delivered to The Director-General of the World Health Organisation.
ရှားပါးရောဂါလူနာစကားသံကိုပိုကောင်းတဲ့ကျန်းမာရေးနည်းပညာအကဲဖြတ် (ထာ) တွင်ဖမ်းမိနိုင်ပါတယ်မည်သို့သုတေသနစီမံကိန်းကိုရှားပါးခြင်းနှင့် Ultra-ရှားပါးအခြေအနေများဆက်ဆံဖို့ကုထုံးဘို့ process လုပ်တယ်။ Nice Highly အထူး Technologies ကနှင့် Alpha-1 ဗြိတိန်နိုင်ငံပံ့ပိုးမှု Group ကထုတ်ဆောင်သွားကြ၏။ ဤသည်မှာစစ်တမ်းရှားပါးရောဂါလူနာအုပ်စုများအတွက်လုပ်ငန်းစဉ်ပိုကောင်းနှင့်ပိုပြီးဆွဲဆောင်မှုရှိတဲ့စေမည်ဟုသောသရောထာစနစ်ချို့တဲ့သောအရာကိုလှန်ရန်ရည်ရွယ်သည်။ သင့်ရဲ့ပြောရှိသည်ဖို့ကဒီမှာကလစ်နှိပ်ပါ။
အသစ်ဥရောပအဆုတ်ဖောင်ဒေးရှင်းမှစစ်တမ်းတစ်ခုအဆုတ်အခွအေနေမိသားစုစီမံကိန်းနှင့်ကိုယ်ဝန်န်းကျင်လူတစ်ဦး၏ options နဲ့ရွေးချယ်မှုထိခိုကျနိုငျရှိခြင်းကိုဘယ်လိုအကြောင်းပိုမိုလေ့လာသင်ယူရန်ရည်ရွယ်သည်။ သူတို့ကကလေးမွေးဖွားပြီးနောက်တစ်မိသားစုစတင်ထည့်သွင်းစဉ်းစားခြင်းမှ, sarcoidosis အပါအဝင်မည်သည့်အဆုတ်အခြေအနေနှင့်အတူလူများ၏အတွေ့အကြုံများ, အကြောင်းပိုမိုထွက်ရှာတွေ့ချင်ပါတယ်။ အဆိုပါစစ်တမ်းကိုဒီနေရာမှာအွန်လိုင်းရရှိနိုင်ပါသည်။ တုံ့ပြန်ချက်ဥရောပအသက်ရှုလမ်းကြောင်း Society က (အဖွင်) နှင့်သြစတြေးလျ၏ Thoracic Society နဲ့နယူးဇီလန် (TSANZ) နဲ့အလုပ်လုပ်ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုကျွမ်းကျင်သူများတစ်ဦးအဆုတ်အခွအေနေနှင့်အတူလူသည်လက်ရှိတွင်ကိုယ်ဝန်ဆောင်စဉ်ဂရုစိုက်နေကြသည်ကိုမည်သို့နားလည်ရန်ကူညီပေးပါမည်, အဘယ်မှာပိုပြီးသုတေသနဒေသများမီးမောင်းထိုးပြနိုင်ရန်ကူညီပေးပါမည် လိုအပ်သည်။